izay nahitana olona 5 voa avy any Fenoarivo Antsinanana avokoa. Tamin’ny 172 fitiliana teto Antananarivo kosa dia 11 no voa (5 Toamasina, 2 Moramanga, 2 Antananarivo, 1 Amparafaravola, 1 Andilamena). 16 izany ny tranga hitan’ny IPM. Ho an’ny HJRA kosa dia fitiliana 61 no natao, ka nahitana tranga 3. Nisy marary 11 vaovao, ka 10 tany amin’ny CHU Morafeno Toamasina, ary 1 teny amin’ny Hopitaly manara-penitra eny Andohatapenaka. Niampy iray kosa ireo marary mafy na “forme grave” ka 9 ny fitambarany hatreto, izay any Toamasina avokoa.Feno ny toerana any amin’ireo hopitaly ny Foyer social Canada ary ny CRJS ka izay no antony nampitaovana ny CEFTAR handraisana ireo mararin’ny Covid 19 tsy mampiseho soritr’aretina. Miisa 11 954 ny fitiliana rehetra vita, ary 845 ny olona voamarina fa voa. 185 no sitrana, ary 646 no mbola tsaboina, ary 6 no efa namoy ny ainy.